Gulf na Dubai 2020 | Ọrụ - Nlekọta - Njem 【Ewebata & Visa enyere Provid
Gulf na Dubai 2020
John Smith Onye isi
GHỤRỤ ỤBỌRỤ gị na-ejikọta na JOBPRO.ae
Dubai City Company Nbanye
Ọrụ na Dubai 2020 na Dubai City Company. Anyị na-enye aka na-enyere aka expats na mpaghara Gulf. Ugbu a enwere ike ịchọta ọrụ na Dubai na ụlọ ọrụ ndị na-ewe ndị ọrụ na UAE. Anyị na-enye ọtụtụ ọrụ n'efu na Emirates. Ihe mbụ ị ga-echeta bụ n’efu ka onye ọ bụla tinye nkọwa na ụlọ ọrụ anyị. N'ihi na anyị na-etinye ndị na-achọ ọrụ site na mba ọzọ maka ọrụ Middle East.
Anyị bụ mgbe niile na-enyere ndị na-achọ ọrụ aka ịmalite ọrụ ọhụrụ na Dubai. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ na Dubai na Abu Dhabi. Inye oru di elu n’ime ahia ndi mmadu. N'aka nke ozo, anyi Ebe nrụọrụ weebụ ọrụ Dubai enyere aka karịa mmadụ 1 nde mmadụ gara aga n'ụwa niile. N'ihi inweta ọrụ na Dubai ọ bụghị ihe dị mfe ime karịsịa na 2020 na 2021.
Usoro Hiring na Dubai
N'eziokwu, ụlọ ọrụ Dubai City Company bụ otu n'ime ihe ndị kachasị ndị ọkachamara UAE na-ewu ewu. Firmlọ ọrụ anyị na-enye ndị ọbịa si India kwagara ọrụ dị mma. Na ụlọ ọrụ anyị na-enyekwa ndụmọdụ na atụmatụ ọrụ. Ma n’ezie, enwere ohere dị ukwuu maka ụzọ ọsọ ọsọ iji chọta ọrụ na United Arab Emirates.
Anyị na-achọ ịbụ ụlọ ọrụ No.1 maka ndị ọrụ ụwa ọhụụ na Middle East. Ọzọkwa, anyị na-agbasi mbọ ike igosipụta ya na United Arab Emirates. Ibugote ịmaliteghachi gị na Companylọ Ọrụ Dubai dị mfe ma ụzọ dị irè isi chọta ọrụ.
Ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mma na can nwere ike ịmere onwe gị n’ihe gbasara ịchọta ọrụ. Etinyego ya na oru ohuru na UAE ma obu Qatar. A ga-echekwa ọdịnihu gị na nke ezinaụlọ gị. Na ọrụ Dubai na 2020 na 2021 dị nso n'akụkụ gị. Maka na site n’enyemaka anyị, ị ga-achọ ọrụ na UAE.
Anyị na-enye Dubai Jobs 2020 maka ndị ọpụpụ!
N'ime ọtụtụ weebụsaịtị na Dubai. Anyị na-ejide ọnụ ọgụgụ kasị elu ma na-arụ ọrụ karịa. Companylọ ọrụ anyị na-enye ozi maka expats na Middle East. Yabụ, n'eziokwu, ọ bụrụ na ị na-achọ ịchọta ọrụ na UAE. Companylọ ọrụ anyị nọ ebe a iji nye ọrụ na Middle East. Dika odi, i gha acho oru na Dubai ma obu uzo, choo ihe banyere Dubai City. Na n'ezie bulite malitegharịa maka Dubai Jobs na ọrụ 2020 ọhụrụ. Ihe ọ bụla na - eme, ụlọ ọrụ anyị na - enyere gị aka iru ihe ịga nke ọma nke gị ọrụ na nke ọ bụla. Ma ị bụ onye na-achọ ọrụ ọhụrụ, maọbụ na ịmalite a ọrụ na Dubai. N’eziokwu, ị bụ onye ọrụ nwere ahụmahụ. Ikwesiri zue onwe gi ahia na Emirates. Nwere ike hoo haa chọta ozi bara uru banyere ọrụ.
Ihe otu ụbọchị anyị na-eme kwa ụbọchị Dubai Ọrụ na Utu ndi otu. Na-enyere ọtụtụ nde mmadụ aka ndị na-achọ ọrụ iji nweta ọrụ na Middle East. Ebumnuche anyị bụ ilekwasị anya na iwepụ aha gị ebe ahụ na iwulite ọnụnọ azụmahịa siri ike. Maka ebumnuche nke ọrụ ị ga - esoro na Dubai City Company. Anyị ga-ewere nke gị nyocha oru ruo ọkwa ọzọ. Ndị ọrụ ọrụ anyị mgbe niile na-achọta ụzọ iji zụọ ahịa gị na inyere gị aka nweta ọrụ na UAE. Ya mere, Dubai Jobs 2020 aghọwo ugbu a maka ndị ọkachamara si mba ọzọ.
Ọrụ na Dubai na 2020 ugbu a abụrụ maka ndị na-ere
Ọ dị mma, n'afọ ndị sochirinụ, ọtụtụ puku ụlọ ọrụ dị na Gulf. N’ile anya iku ndi n’adighi acho ndi choro oru. N’iburu nke a n’uche, ụlọ ọrụ anyị abịanyela aka n’akwụkwọ maka inye ọrụ ọhụụ. Thelọ ọrụ kachasị mma na ndepụta Forbes 500 nke ndị were n'ọrụ na-arụ ọrụ na UAE. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ Dubai 2020 anyị nọ ebe a iji nyere gị aka. Na n'ozuzu ikwu okwu, ụlọ ọrụ anyị na-enye ọrụ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị mmadụ niile. Dịka ọmụmaatụ ndị ọrụ ntuziaka na ndị isi gụrụ akwụkwọ. Yabụ, site na iji ụlọ ọrụ anyị ọ bụ ụzọ maka mmepe ọrụ na Middle East. Yana ezigbo ụzọ ịchọta ọrụ na Dubai 2021.
Lụọ ọgụ ọma maka ọrụ na Dubai
You ga-echeta na e nwere narị narị ma ọ bụ puku kwuru puku ụlọ ọrụ na Dubai na Abu Dhabi. Yabụ enweghị ihe ngọpụ ọ bụla ma ọ bụrụ na ị ga-ada n'ọchọ ọrụ gị. Ọ bụrụgodị na ị ga - eji ụlọ ọrụ anyị rụọ ọrụ nke ọma ị na - abawanye ohere inweta ọrụ na United Arab Emirate site na 80%. Naanị maka ị ga - enwe ike ijikọ ndị obodo ọzọ si mba ọzọ na - apụ na isi obodo nke United Arab Emirates mpaghara.
Kwa ụbọchị, anyị na -emepụta ohere ọrụ ọhụrụ na obodo anyị. Ọ bụ ya mere ọtụtụ puku mmadụ gburugburu ụwa ji na-elele akụkọ na ozi anyị na TV. Ma maa, anyị na-eto site na narị narị ọrụ ọhụụ kwa izu Kariri tupu 2020 ebe ọtụtụ ọrụ ọfịs ga-abịa.
Anyị na-etinye mba niile maka Mba ọzọ na Dubai
Dubai Jobs 2020 - 2021 abụrụla ndị bịara abịa. Karịsịa maka ndị na-emefu ego mba ofesi na mpaghara Gulf. Yabụ, ịkwesịrị ịtụle ka gị na ụlọ ọrụ kacha elu nwee ego na UAE. Enwere ọrụ kachasị mma nke 2 anyị nwere maka ndị ọrụ mba ụwa. Enyemaka ọrụ na ịchọta ohere na UAE. Companylọ ọrụ Dubai City bụ ụlọ ọrụ ama ama maka mba niile. Mana rue ugbu a, anyị na-enwe oke mmetụta na mgbasa ozi na-elekọta mmadụ. Ọzọkwa, ndị ahịa anyị na-etinye echiche dị mma gbasara ụlọ ọrụ anyị n'ịntanetị.
Anyị na-etinye obughi ndi India na ndi Pakistan maka oru n’ahia na Dubai. Companylọ ọrụ ndị na-ewe ndị ọrụ na-edebe ndị si n'akụkụ ụwa niile. Yabụ, dịka ọmụmaatụ, anyị na-enwe ndị ahịa si South Africa na Indonesia. Ọzọkwa, Egypt na Turkey. Yabụ, dịka i si hụ anyị na-etinye ndị ọrụ na Middle East si n'akụkụ ụwa niile. Citylọ ọrụ Dubai City, na-ekwu okwu n'ozuzu ya, na-ahụ maka ọrụ na-enye site na Middle East. Buru nke a n'uche, anyị na-arụ ọrụ na Saudi Arabia, Qatar na Kuwait. Yabụ, ụlọ ọrụ anyị na-ele anya inyere gị aka inweta ọrụ na UAE ma wuo Ọrụ na GCC.
Nweta ọrụ na mpaghara Gulf
Mba Gulf dị ka Kuwait, Saudi Arabia na United Arab Emirates aku na uba na-eto eto oke ngwa ngwa. Yabụ, ị kwesịrị ikpebi ma ị ga-achọ inweta ọrụ ebe ahụ. Naanị n'ihi na enwere ọtụtụ ọrụ na-anaghị agwụ agwụ maka ndị na-eme njem. Ọ bụrụ n’ị bụ ndị na-achọ ọrụ Indian ma ọ bụ Arabik ma ị na-achọ ọrụ n'ime ụwa Arab bụụrụ gị ezigbo nhọrọ.
Dubai na Abu Dhabi, bụ a easier nwere ike mfe ịchọta ọrụ si mba ofesi. Yabụ, dabere na nke ahụ, ị ​​ga - eche ụzọ kachasị mma maka gị na ezinụlọ gị. Ọtụtụ ndị sitere na mba ọzọ na-eme ngwa site na obodo nke ha gaa ebe ọzọ ha chọrọ ịga. Yabụ, ọrụ ịchọ ọrụ nwere ike ịga nke ọma n’ụzọ dị otu a.
Ulo ndi India na UAE
N'oge na-adịbeghị anya, ndị njem ndị India na-akwagharị United Aram Emirates. Gọọmentị India abịapụtala atụmatụ ọhụrụ. Ọmụmaatụ, na-enyere ha aka na E-visa mmemme, na ọbụghị naanị hazie visa dị mfe na ịlaghari n’usoro dị mma. Mana nyemaka nchekwa nke ụmụ amaala ya mgbe ha na-arụ ọrụ na mba ọzọ.
Otu n'ime ebe kacha dị mkpa maka ndị ọrụ na UAE. Ọ bụ ama ama ụwa niile dị ka ala ohere maka ndị ọkachamara na ngalaba niile. Yabụ, ị ga-anwale ike gị ma nweta ọrụ na United Arab Emirates.
Kemgbe mmalite nke ibughari amalite ogologo oge gara aga na Dubai. A choro ndi India ka ha debanye aha na ntanetị Gọọmentị na-achịkwa tupu ha aga UAE maka ọrụ.
Ugbu a ọ dị mfe ịkwaga si India!
Companylọ ọrụ anyị na-aga n'ezie na-enwe olile anya na ị ga-abụ otu n’ime ndị otu ego anyị. You nwere ike ịhọrọ site na akaụntụ nkiti ma ị nwekwara ike ịghọ onye otu ego na nke ga-adị echiche mara mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ ohere ọhụụ na mba ndị dị n'etiti East. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ Qatar ma ọ bụ ọrụ na Kuwait.
Ndi India nabatara na Dubai?
I kwesiri ikwenye nweta uru mgbe ị ga-edebanye aha profaịlụ gị ị nwekwara ike biputere profaịlụ nke ahụ na mgbasa ozi mmekọrịta dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, LinkedIn ma ọ bụ Facebook Na ọtụtụ ndị ọzọ ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ ga-enwe ike ihu profaịlụ gị yana nke ahụ hoe ga - ewetara gị ohere ọrụ ọhụrụ ebe ị nwere ike igosipụta nkà gị na n'ezie ihe siri ike ịme ya ka ọ nwee profaịlụ agụmakwụkwọ.
Anyị dị iche karịa ụlọ ọrụ ọ bụla ọzọ. Nanị n'ihi na anyị atụgharịrị ụlọ ọrụ anyị n'ọtụtụ narị asụsụ. Nke ahụ na-enyekwa expat ndị mmadụ ndị na-achọ ọrụ n'aka ụwa niile. Dịka ọmụmaatụ, anyị ghọrọ ụlọ ọrụ kachasị elu na Indonesia, India na Philippines. Yabụ dịka ị pụrụ ịhụ na nke ahụ bụ ọtụtụ puku ndị mmadụ na-achọ ụlọ ọrụ anyị na Google. Anyị dị ezigbo mma na nkwalite Dubai maka na otu a ka anyi si enweta ndi mmadu. Anyị n’ezie inyere ndị mmadụ aka igosi ha ya lee ka o si di nnukwu Dubai anyi.
Lee ụfọdụ ndụmọdụ ga-enyere aka iji nweta ọrụ gị
Naanị mgbe ọrụ ọhụụ na-achọ ọrụ. Ha na-ele anya n'ezie maka ọrụ dị ụtọ nyere na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi. N'iburu nke a n'uche, ụlọ ọrụ anyị amalitela itinye onwe anyị dịka otu n'ime ọrụ ụlọ ọrụ kachasị mma na Dubai. Anyị na-enyocha kpakpando ise na Facebook na Twitter. Ebumnuche anyị bụ inyere ọtụtụ mmadụ aka dị ka anyị nwere ike ma kpọọ stem na United Arab Emirates. N’ezie, anyị nwere olile anya na gị na ụlọ ọrụ anyị ga-esokwa gị, ị ga-esokwa ọrụ ahụ. Nke ahụ bụ ọtụtụ ụlọ ọrụ mbanye ndị na-anọdụ na anyị webụsaịtị na-achọ Ọrụ Ọchọ.
Companylọ ọrụ anyị na-aga n'ezie na olileanya ahụ will ga-abụ otu n’ime ndị otu anyị ji agba ụgwọ. You nwere ike ịhọrọ site na akaụntụ nkiti ma ị nwekwara ike ịghọ onye otu ego na nke ahụ ga-abụ echiche mara mma ma ọ bụrụ na-acho uzo ohuru na Middle East. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ Qatar ma ọ bụ ọrụ na Kuwait. Gha ekwesiri inweta uru mgbe ị ga-edebanye aha profaịlụ gị ma ị nwere ike biputere profaịlụ nke ahụ oge niile na mgbasa ozi mmekọrịta dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, LinkedIn ma ọ bụ Facebook. Na ọtụtụ ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ ga-enwe ike ịhụ profaịlụ gị yana nke ahụ chọrọ nye gi ohere oru ohuru ebe ị nwere ike igosipụta nkà gị na n'ezie ihe siri ike ịme ya ka ọ nwee profaịlụ agụmakwụkwọ.
A nabatara ndị India maka ọrụ na Dubai?
Dubai bụ ezigbo ebe ndị ala ọzọ!
Dubai agbanyeghị na ọ bụ Ahịa dị ọkụ iji nweta ọrụ. Esiane sɛ me ho pere me sɛ mede me ho bɛto Yehowa so nti. Anyị kwesịrị ịnwe ọtụtụ akwụkwọ egosipụtara. Dịka ọmụmaatụ, ọ ga-adị mkpa ka ị gụọ akwụkwọ nke ọma tupu ịmalite ịmalite ichebara echiche ịchọta ọrụ na Middle East. UAE enweghị mba dị iche karịa mba ndị ọzọ. Anyị na - achọ naanị ndị gụrụ ezigbo akwụkwọ ma nwee ezigbo ọzụzụ na azụmaahịa.
Y’oburu na odi nkpa banyere icho oru na Middle East. Ikwesiri ilebanye anya na ụlọ ọrụ Dubai network Social Network Services. Anyị bụ ezigbo ezigbo ụlọ ọrụ pịtụgharị dị mkpa maka onye na-achọ ọrụ ndị na-achọ ọrụ na Dubai na 2020. N'ikwu okwu n'ozuzu, dịka ị pụrụ ịhụ na ọ bụ karịa narị puku ndị na-achọ ọrụ na Portal anyị na Mumbai. N’ezie n’anyị enweghị ike izobe ha niile mana anyị na-anwa idobe ọtụtụ mmadụ ka ngwụcha izu maka ọrụ na Dubai n’afọ ndị sochirinụ.
Ọ dịla mgbe ị gara Dubai?
Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ịnwetụbeghị na Dubai. Ikwesiri ịmara na iwu ole na ole ị sororo. Anyị nọ na Dubai enweghị mmasị na ndị mmadụ na-a drugsụ ọgwụ ọjọọ na ị drinkingụ mmanya. United Arab Emirates nọ n'okpuru iwu Sharia. Ma anyị bụ mba Alakụba n’agbanyeghi na anyị na-akwado ma anyị na-akwanyere mba dị iche iche ùgwù. Ma mgbe ị bịara n’obodo anyị ị ga-amalite ịrụ ọrụ na Dubai. Needkwesiri ịgbaso iwu anyị na-enweghị atụ. Anyị kwenyere na ọdịbendị anyị gbara m gburugburu na nrọ bụ nke a ihe anyị na-ewu na United Arab Emirates.
Ee, n’ikwu okwu n’otu, ị nwere ike ịbịakwute obodo anyị ma ị ga - amụta ọtụtụ n’ime mm ụnụ nwere mmasị. United Arab Emirates na-ele anya mgbe niile ịkụziri ndị mmadụ ihe ma nyere ha aka ịzụlite ụlọ mmanya na ahụmịhe ha. Yabụ ọ bụrụhaala na ị ga - ebido dị ka onye ọrụ ọkọlọtọ, nke ahụ bụkwa ihe ọtụtụ ndị si mba ọzọ. Ma n'aka nke ọzọ, mgbe ị ga - amalite inweta ahụmịhe can nwere ike ịchọta ọrụ kachasị mma n’etiti obodo. Agbanyeghị, iji mee nke a, ọ ga-adị mkpa ịnweta ahụmịhe siri ike na obodo Dubai.
Ịzụ ahịa, nduzi na ibi ndụ na UAE
Middle East nwere otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị elu nke 100 Forbes. Na anyị nọ na 10 kachasị elu na Middle East na nke ahụ bụ eziokwu. Imirikiti ndị na-edebanye aha na weebụsaịtị anyị dị ka ndị ị na-achọ maka ezigbo ohere na ụgwọ ọnwa ka enyere ezinụlọ ha aka.
N’agbanyeghi udala otutu anyị ka na-eto ma na-eto obodo nke nwere nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Nwere ike ịchọta ọrụ n'ọtụtụ azụmahịa. Dịka ọmụmaatụ mgbasa ozi na ahịa. Ọzọkwa, ahụike, agụmakwụkwọ na teknụzụ ozi. Edere anyị ebe ọrụ a maka ọtụtụ narị ndị mmadụ gburugburu ụwa. Ka ijikọ onwe gị wee nweta ozi ndị na-atọ ụtọ na-akwado ibe gị n’ịchọ ọrụ.
Dubai na-ewepụta nrọ maka ndị ọhụụ
Na mba anyị nke ahụ bụkwa ọtụtụ ebe ị nwere ike ịmalite azụmahịa gị iji wuo akụnụba gị na n'ezie ibu ezigbo obi uto. N'ihi na obodo Dubai na-enye ọtụtụ ndị ndu na ụdị ndụ dị ka ụdị ohere. Ọ bụghị iwu na ị ga-ekpe naanị ya na-arụ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ dị na isi obodo United Arab Emirates. Can nwere ike ịhọrọ ụzọ nke gị wee bụrụ onye ọchụnta ego na-aga nke ọma.
Anyị na ụlọ ọrụ anyị, willgaghị ahụ ọrụ na Dubai. Will ga enwe ohere iji mee ka nrọ gị mezuo. Dubailọ ọrụ obodo Dubai na-ekwupụtakarị ga-enyere gị aka inweta ohere kachasị mma na ndụ gị. Lelee anya na nnọkọ anyị na kọwaara onwe gị ndị ọzọ nọ na mpaghara Ọwara. Ma nwee olile anya na nke ahụ ga-ejikọ gị na ụmụ nwoke ga-emekọ azụmahịa.
Ọ bụ Dubai bụ ebe kacha mma maka ọrụ?
Na-arụ ọrụ na Dubai maka ndị ọpụpụ niile na-achọ ọrụ na mba ọrụ ọrụ mba ụwa. Companylọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịnabata ndị ọbịa mba ụwa. Boardlọ ọrụ na-ahụ maka njikwa anyị nwere ihe karịrị 22 afọ nke ahụmịhe na mpaghara mpaghara Gulf. Anyị na - akpọghachi ndị ọrụ maka ahịa UAE kemgbe 2009. Na-ekwu maka ya, na-enwe ahụmihe ahụ ọtụtụ afọ na ịbanye n'ọrụ n'ahịa Arab. Emee ka anyị bụrụ otu n'ime ọrụ 10 ndị ọrụ ego kachasị elu na ụwa azụmahịa nke Arab. Ahụmahụ anyị nwere ọtụtụ afọ, O nyeerela ọtụtụ puku mmadụ aka ịchọta ọrụ na United Arab Emirates.
Enwere Ụgwọ Ịkwụ Ụgwọ Free na UAE?
Afọ a, anyị na-abanye n’ahịa ọrụ Gulf. Anyị na-enyere ndị expats aka ịchọta ọrụ na Dubai na Abu Dhabi. Companylọ ọrụ anyị bụ ọgbakọ tozuru etozu. Nke na-enyere ndị ọkachamara aka expats onye jisiri ike chọta ọrụ na ọkwa dị elu na Dubai City. Salarygwọ ọnwa kwa ọnwa nke ị na-atụ anya na ọ dabere na ahụmịhe isi. N’ezie, ọ bụrụ na mmadụ nọ na Dubai ga-eme ọtụtụ Dirham.
Ọ ga-amarakwa na iwepụ ego a ga-emetụta akaụntụ ahụ dum. Ma n’ezie, na-enweghị ụtụ isi na onyinye ego ezumike nka. Ee, Dubai ka anaghị akwụ ụtụ. Agbanyeghị, na Emirates. Nwere ike ịchọta ọbụna ụgbọala egwuregwu metụtara ọrụ. Ọzọkwa, na Dubai na Abu Dhabi, ha bụ ndị ọkwọ ụgbọala uber na ferrari. Ma, n’ezie, ndị were ọrụ na-akwụ ụgwọ nlekọta ahụike. Na ọzụzụ nkeonwe maka ụmụaka bụ ihe kachasị mma !.
Ógbè Gulf nke Peasia | Emi Emi
Ọwara ndị Peshia bụ otu n'ime ebe kachasị mma iji rụọ ọrụ. Ọ bụghị naanị n'ihi na ị ga-eme ya nweta ohere dị ịtụnanya dịka ọrụ na Dubai, mana ị ga - enwe nhọrọ iji rụọ ọrụ na mba dị iche iche ma ọtụtụ n'ime ha nọ otu nke kachasị mma maka expats dịka ọmụmaatụ Poland. Bahrain, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia na United Arab Emirates (UAE). Ebe ndị a niile bụ ebe kachasị ukwuu maka ngagharị maka ọrụ.
The bịara n’ezi ikike ọkachasị ma ọ bụrụ n’ị na-achọ ọrụ na Abu Dhabi ma ọ bụ Dubai. Yabụ na ụlọ ọrụ anyị nwere olile anya na ọ nọrọ ịzụta ị ga-achọ mee nnukwu ohere ọrụ na United Arab Emirates. Agbanyeghị, anyị ejedebeghị na UAE. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ ị nwere ike ijikọ ndị ọzọ Mpaghara Ọzara Persian. na n’ezie mee ka nrọ gị mezuo.
Otu esi achọta ọrụ na Dubai?
Anyị achọpụtala ruo ọtụtụ afọ nke azụmahịa mbanye na Emirates. Nke ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba ọ bụla nwere mmasị dị ukwuu na ọrụ na Emirates. Karịsịa ná mpụga ókèala ala anyị dị ka Indonesia na Poland. Osisi ji obi ike na-aga mba ọzọ. MIwu maka ịchọta ọrụ ọhụrụ na Dubai. UAE na-enye ọtụtụ echiche maka expats. Na ụdị dị iche iche na afọ dị iche iche na ahụmịhe dị iche iche.
Otutu ndi mmadu n’abia n’ulo Emirates etinyerela ala igha mba ozo. N’ebe ụfọdụ dị ka United Arab Emirates. N'aka nke ọzọ, ndị obodo Dubai nwere ekele na ndị expats ahụ so ha rụọ ọrụ. Oge ụfọdụ ndị na-arụ ọrụ Dubai na-akwụ nnukwu ụgwọ. Nwere ike ịchọta ọtụtụ ihe na-enye na ahịa ọrụ dị ka ego a na-akwụkarị ya na mgbakwunye ego awa.
Kedu ihe anyị nwere ike inye gị?
Companylọ ọrụ anyị bụ Dubai City Company na-enye ndị ọrụ ala ọzọ ụdị ọrụ dị iche iche maka ịchọta ọrụ Dubai. Ọtụtụ ndị na-ekpebi iji soro ezinụlọ ha gaa ma bido ibi ndụ ọhụụ n’asụsụ Arabik. Companylọ ọrụ anyị egosila ndị ọrụ ọrụ ọrụ na ọrụ ha ogologo oge. Anyị na-enyocha onyinye ọ bụla. N'ihi nke a na nchekwa na steeti.
Citylọ ọrụ Dubai City na-enye naanị ọrụ a nwapụtara. Anyị na-enyere ndị Poles, ndị India, Pakistanis na ndị Indonesia aka ịchọta ọrụ kachasị mma na Emirates. Gbalịa ịbanye na ọrụ ha zuru oke. A na-enyocha mmalite nke ndoro-ndoro ọ bụla site n'aka ndị isi ọrụ ego. Ma zigaara ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị. N'ihi ọrụ anyị, ị nwere ike ịchọta onyinye kachasị mma maka onwe gị na Abu Dhabi. A na-enyocha ma nyochaa ọrụ ọ bụla na onye were ya n'ọrụ. Nke ahụ bụ naanị ụzọ iji nyere gị aka inweta ọrụ na Dubai. Nke a bụ ebe dị mma maka ndị nwunye na-elekọta ọlụ.
Kedu onye anyị na-achọ na Dubai?
Anyị na-ele anya maka ndị na - achọ ọrụ ọhụụ site n'akụkụ ụwa niile. Yabụ ka anyị chọgharịa ntakịrị ihe anyị na-eme kemgbe afọ ole na ole na Dubai. Companylọ ọrụ anyị hiwere isi na London ọtụtụ afọ gara aga. Ma kemgbe ahụ anyị etolitewo n'ọtụtụ ebe gburugburu ụwa. Anyị ejisie ike na-akpọrọ ndị India na Pakistan, anyị wee zigara ha obodo anyị mara mma na Dubai. N'ime afọ 3 izizi na Middle East. Anyị na-agbasi mbọ ike iji nweta ndị kwesịrị ekwesị na n'ezie ezigbo ndị mmekọ ụdị ahịa ha na ha na-emekọrịta ihe. Ruo ugbu a, anyị bụ otu n'ime ndị ahụ ụlọ ọrụ ndị na-ewu ewu na Middle East.
N'oge a anyị na-enyere ndị mmadụ aka inwe ahụmịhe dịka onye isi ụlọ ọrụ na ndị na-arụ ọrụ n'ọfịs. Kaosinadị, nke ahụ bụ ọtụtụ narị ọrụ ọhụụ na-enye kwa izu ị kwesịrị ịkwalite akaụntụ gị ma bulite ịmaliteghachi gị na ụlọ ọrụ anyị. N'ihi na anyị na-aga n’ihu inyere gị aka ma mee ka ị dị ọsọ ọsọ dịka anyị nwere ike.
Yabụ na onweghị ihe anyị mere na-achọ ọrụ. N’oge ahụ Saudi Arabia na-ahapụ ndị njem niile. Yabụ na-ekwu n'ozuzu ma ọ bụrụ na ị na-ele anya maka enwere ezigbo ohere ọrụ na Middle East. Kwesịrị inweta aha profaịlụ gị maka na ọ bụ n'efu. Companylọ ọrụ obodo Dubai na-ewere ndị na - achọ ọrụ si n'akụkụ ụwa niile. Ndị nnọchi anya ndị ọrụ ịnwe obi ụtọ karịa inyere gị aka na usoro nyocha ọrụ gị na Dubai.
Aha m bụ James na m bụ onye isi nke ụlọ ọrụ Dubai City.
Ugbu a, ka m kọwaara gị azụmahịa m, nyocha ọrụ bụ naanị mmalite. A ga-agba gị ajụjụ ọnụ site na ndị na-ewe ihe na ndị na-ahụ maka ọrụ gburugburu ụwa na mmemme anyị, enwere m ike ikwe gị nkwa na ọ bụrụ n’ịche na atụmatụ ị nwere dị mma nke a bụ n'ogo ọhụụ. Kwere m ma ọ bụrụ na ị ga-eme ọkara ọkara ndị ọzọ niile gabigara mmemme a, you're ga-enwe mmasi nke ukwuu.
Ụda dị mma?
Ọ dị mma, sistemụ anyị bụ ọ bụ ego naanị $ 4.99 maka ngwungwu nkiti yana nke ahụ gụnyere ịchọ ọrụ n'obodo ukwu gburugburu Middle East, dịkwa ka m kwuru na nke a ga-abụ ntinye ego kachasị mma. Ọ bụrụ n’ị sonyere n’usoro mmemme anyị, naanị nsogbu ị ga - enwe bụ na akpọghị m gị ọnwa isii gara aga ma debanye aha gị mgbe ahụ.
Echere m ka m kwuo nke a banyere ezigbo ịma mma nke Jehova mmemme bụ n’ezie ihe mmemme na-abịa n’ejighi nkwa nkwụghachi, mana ọ bụrụ na ị gafere na mmemme ahụ ma echeghị na ọ bụ ntinye ego kachasị mma n'ịchọ ọrụ ị rụtụrụla mgbe ahụ ị ga - enweta ọrụ na Dubai !.
Ihe ngwugwu m na-atụ aro maka ndị ahịa m bụ Premium n'ihi dabere na ahịa ọrụ UAE. Imirikiti ndị ahịa m na-enwe ahụmịhe nchịkwa ma ị nwere ike ị nweta Global Market, dịka ọmụmaatụ, enwere m ike ịkwado gị ka VP nke JP Morgan na onye isi nke ike nbanye na Dubai.
N'aka nke ọzọ, ị ga - enweta nkwado zuru ezu n'ịchọ ọrụ, ihe m na - ekwu bụ:
Otu m ga - achọ maka ọrụ maka gị na UAE na Qatar ọ bụrụ na ịchọrọ.
✔ Ha ga-ejikwa kọntaktị ndị isi na ndị na-amụrụ gị na CV gị.
✔Mgbe otu a ga-akpọ ndị ọrụ tupu ha eziga gị CV ka anyị ghara ịme ha ka ha zuo ike na ụlọ ọrụ ahụ!!
✔Onye onye nlekọta gọọmentị ga-ele anya na CV gị ma chekwaa akwụkwọ iji jide n'aka na ị nwere nkọwa ọ bụla na ntụgharị okwu ziri ezi.
Anyi tinyekwara gi na Ihe ndekọ data mba dị ka Bayt.com na Gulf Talent
✔N'ihi na anyị na-ejikarị 2-3 Interviews kwa ọnwa na ndị ọrụ gị n'ime oge 2 ma ọ bụ 3.
✔Nke usoro maka akwụkwọ visa, akwụkwọ mbata ma ọ bụ akwụkwọ amaala maka ọrụ ọhụrụ.
Ọ bụrụ na ọ dị anyị mkpa, anyị ga-eme ya mee ajụjụ ọnụ a na WhatsApp ma ọ bụ Skype na onye isi nchịkwa anyị iji dozie ihe ị tụrụ anya ya na ịchọ ọrụ.
✔Ị ga-enwe ngwa ngwa ọkachamara nke ejiji na nke ga-eme ka ị bụrụ isi na ubu karịa mpi gị na Middle East.
✔Ndi otu ga-eziga CV gị na ntinye oru nile nke anyi nwere na ebe nrụọrụ weebụ di n'ime ihe omuma gi.
✔N'ihi na anyị ga-ezitere gị CV na Top Headhunters na Middle East ka ha wee nyochaa Resume gị.
✔dị profaịlụ gị na Portal anyị ga-abụ nke adịchaghị mma yana nhọrọ ndị akọwapụtara maka ndị were ọrụ ọhụrụ na ndị dịbu adị.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị gaghị enwe obi ụtọ na ọrụ ọrụ nlekọta ọrụ anyị nyere gị mgbe ahụ, anyị ga-agbapụta ego.
Ejirila m aha dị iche iche rụọ ọrụ nke ọma ma soro ndị na-ahụ maka nde ndị isi n'ụwa niile na-arụ ọrụ, dịka ọmụmaatụ, ọrụ m nwere ike ijikwa gị:
Onye isi ọrụ nchịkwa na Goldman Sachs na DFC
Osoje onye isi ahia n’ime Marketingzụ ahịa na nkwari akụ Hilton
Amazon IT Director Director maka Echo Alexa oru
Onye ọkachamara nke ọgụgụ isi maka ọrụ gọọmentị na azụmahịa na UK
Mee ọrụ dịka CEO n'ime ahịa ahịa Cryptocurrency na India!
Ndị na-ahụ maka ndị ọrụ nchịkwa mmadụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ mba ụwa na UAE
Anyị na ndị ọkachamara nke UAE na ndị Qatar na-arụkọ ọrụ.
Na ọtụtụ ndị ọzọ ndị isi oru ...
Mee ka m mara ma ị ga - achọ Gbalịa na-ekwu okwu mgbe niile na ekwentị m ma ọ bụ onye njikwa m nwere ike ịkpọtụrụ gị mgbe niile.
Citylọ ọrụ Dubai City ugbu a na-enye ezigbo nduzi maka Ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ndị njem Dubai. Ya mere, na nke a n'uche, ị nwere ike inweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates na asụsụ nke gị.